Klopp oo shaaca ka qaaday mudada uu garoomada ka maqnaanayo Henderson kaddib dhaawacii ka soo gaaray kulankii Atletico Madrid – Gool FM
(Liverpool) 21 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Jimco ah mudada uu garoomada ka maqnaanayo Jordan Henderson, kaddib markii lagu sameeyay dhowr jeer baaritaano caafimaad ee la xiriira dhaawaca soo gaaray.
Jordan Henderson ayaa laga saaray garoonka daqiiqadii 80-aad ee kulankii ay kooxaha Atletico Madrid iyo Liverpool ku wada ciyaareen lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League, kaasoo Reds loogu awood shegtay 1-0.
Macalinka reer Germany ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu ku xaqiijiyay in Jordan Henderson uu maray baaritaano caafimaad galinkii hore ee maanta oo Jimco ah waxaana lagu ogaaday inuu qabo dhaawac dhanka muruqa ah, kaasoo uu garoomada kaga maqnaan doono muddo gaaban.
Haddaba Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Jordan Henderson uu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan mudo saddex Isbuuc ah, sababa la xiriira inuu dhibaato ka qabo dhanka muruqa.
Jurden Klopp oo u jawaab celiyay Tageere Manchester United ah kaddib markii uu....